Uummata Oromoo - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 9:49 7 Muddee 20219:49 7 Muddee 2021
Abbaa Gadaa Karrayyuu torbee darbe ajjeefame waliin qabamanii kan turan namoonni 25 ta'an achi buuteen isaanii dhabamuu maatiin BBC'tti himan.
...tti maxxanfame 4:14 6 Muddee 20214:14 6 Muddee 2021
Geega'oo - Sirna misirroota mana bahan ittiin gadi dhaaban
Oromoota Arsii Sikkoofi Mandoo biratti aadaa fuudhaafi heerumaa keessatti sirnootni Gabbaraafi Geega'oo jedhaman sirnoota kennaan ittiin kennamuudha.
...tti maxxanfame 5:42 5 Muddee 20215:42 5 Muddee 2021
Tattaaffii hojiifi ogummaa Aartist Lammaa Guyyaa dhalootatti dabarsuuf taasifamu
Erga gameessi nama aartii fakkii kaasuun beekaman Aartist Lammaa Guyyaa du'anii waggaa tokko ta'eera. Du'a isaanii hordofee faawundeeshiniin maqaa isaaniin hundaa'eefi hojii isaanii dhalootatti dabarsuuf kaayyeffate hojiii eegaleera.
...tti maxxanfame 11:25 4 Muddee 202111:25 4 Muddee 2021
Manni Murtii Waliigalaa Federalaa ol iyyannoo abbaan alangaa himata Obbo Jawaar Mahaammad fa'aa irratti dhimmi isaanii 'bakka isaan hin jirretti haa ilalamu' jechuun fudhate kuffisuu abukaatota isaanii keessaa tokko kan tahan Obbo Kadir Bulloo BBCtti himan.
...tti maxxanfame 16:18 3 Muddee 202116:18 3 Muddee 2021
Godina Shawaa Bahaa daangaa Aanaa Boosati fi Aanaa Fantaalee iddoo Kaarra ykn Mootoma jedhamu qubatanii kan turan Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadiir Hawaas dabalatee, namoonni 14 humnoota mootummaan ajjeefamuu jiraattonni BBCtti himan.
...tti maxxanfame 4:26 30 Sadaasa 20214:26 30 Sadaasa 2021
Barsiisaafi barreessaa kitaabota lamaa ta'uu kan himu Jaatanii Boonayyaa Godaanaa wal dorgommii waa'ee nagaa dhaabbata biyyoota Gaanfa Afrikaa hammatuun qophaa'e injifateera.
...tti maxxanfame 5:05 28 Sadaasa 20215:05 28 Sadaasa 2021
...tti maxxanfame 13:14 25 Sadaasa 202113:14 25 Sadaasa 2021
KFO'n 'mootummaan yeroo' hatattamaan akka hundaa'u gaafate
Dhaabni mormituu filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa jahaffaa keessaa kan hin dorgomiin hafe Kongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO) 'mootummaan yeroo' atattamaan akka hundaa'u gaafate.
...tti maxxanfame 4:28 24 Sadaasa 20214:28 24 Sadaasa 2021
Kongirasiin Idil-addunyaa Ummata Oromoo dhiyeenya hundaa'e hayyoonni akka waan danda'an hundaan akka siyaas-dinagee fi hawaasummaa Oromoo tumsaniif hojjeta jedhan Dr Huseen Kadir.
...tti maxxanfame 4:44 23 Sadaasa 20214:44 23 Sadaasa 2021
Abbaan Jaallee 'Kabbitoo', jaarsi ganna 70 akkamiin ajjeefaman?
Abbaan Artiist Jaallee Amantee ykn 'Kabbitoo' maanguddoo ganna 70 kan ilmi isaanii miseensa WBO ta'e, torban darbe to'annoo poolisii jalaa baafamanii humnoota nageenyaan ajjeefaman jechuun maatiin himatan. Qondaalli olaanaa 'kuni dhugaarraa kan fagaate' jechuun deebisaniiru.
Page 1 Keessaa 99